January 2019 - Page 6 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
January 3, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq ayaa maanta oo Khamiis ah is-weydaarsaday madaafiic, sida ay wararku sheegeen. Ilo-wareedyo katirsan ciidamada Puntland ayaa bog wareedka Puntland Mirror u sheegay in […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maalinta Jimcada ayaa qorshuhu yahay in baarlamaanka cusub ee Puntland uu doorto guddoomiye iyo ku-xigeeno. Afar xubnood ayaa u sharaxan xilka guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Cabdijamaal Cabdijamaal Cismaan Maxamed ayaa labadii xukuumadood ee Puntland […]
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in uu ka doodo arrimaha Soomaaliya maalmo kadib markii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay in dalka ka saarayso ergayga Qaramada Midoobay. Kulanka dhacaya maanta […]
January 2, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa amartay in madaxa ugu sareeya Qaramada Midoobay ee jooga dalka uu tago, iyada oo ku eedaysay in uu farogeliyay madaxbanaanida dalka. Bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada gelinkii dambe ee […]
January 1, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed ayaa us soo baxay warbaahinta bulshada kadib sii deyntii xildhibanada cusub ee Puntland ee la soo doortay. Dumarka ayaa ka xanaaqay markii hal xubin ay ka heleen baarlamaanka […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland and all Somali women have taken to social media following the release of the newly-elected Puntland parliament. The women were angered when they got one member in the new parliament. Nimco Abdi […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubnaha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntand ayaa maanta oo Talaado la dhaariyay kadib markii xalay la sii daayay liiskooda. Dhaarinta oo ka dhacday xarunta aqalka baarlamaanka ee magaalada Garoowe ayaa waxaa kasoo qeybgalay […]